Akhriso: Maxay tahay sababta uu u baaqday shirkii uu ku baaqay Farmaajo? - Awdinle Online
Akhriso: Maxay tahay sababta uu u baaqday shirkii uu ku baaqay Farmaajo?
Dib dhac ayaa ku yimid Shirkii Arrimaha doorashooyinka, oo uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo, kaas la doonayay in la qabto 15-ka February, oo ku beegan maanta.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shalay magacaabay guddi farsamo oo ka ooban 14 Xubnood, kuwaas oo ka kala socda dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada dalka iyo Gobolka Banaadir, si loo dhaqaajiyo Arrimaha Shirkaas.
Guddiga farsamo ayaa u gogol xaarayaa Shirka ku saabsan xallinta muranka doorashooyinka, kaas oo lagu dhammeystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeyay dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada dalka ah iyo Gobolka Banaadir.
Xubnaha Gudiga ayaa ka shaqyan doona sidii uu u dhici lahaa shirka Madasha wadatashiga, ajandayaasha looga hadlayo iyo goobta rasmiga ah oo lagu qabanayo.
Previous articleSenetarkii magaalada Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji oo geeriyooday
Next articlePuntland oo gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-Shabaab